ရင်သားရောဂါ အဖြေရှာ - Ministry of Health (MOH) Myanmar
အမျိုးသမီးတွေ အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ သတိထားမိ၊ စိုးရိမ်မိတတ်ကြတဲ့ရောဂါကတော့ ရင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါပါပဲ
အဲဒါကြောင့် ရင်သားရောဂါနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဆီ မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့….
အမျိုးသမီးအများစုဟာ ရင်သားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေကို သတိထားမိပြီး လာရောက်ဆွေးနွေးကြတာ များပါတယ်
၁။ ရင်သား ကိုက်တာ/နာတာ
၂။ ရင်သားမှာ အလုံး/အကျိတ်စမ်းမိတာ
၃။ ချိုင်းမှာ အလုံး/အကျိတ် စမ်းမိတာ
၄။ နို့သီးခေါင်းကနေ အရည်ထွက်တာ
၅။ ကလေးအမေတွေ နို့တင်းတာ နို့ချောင်းပိတ်တာ ပြည်တည်တာ….ဒါတွေများပါတယ်
(၁) ရှက်လို့ဆိုပြီး တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ မတိုင်ပင်ပဲ အနာအကြီးကြီးဖြစ်မှ ၊ အလုံးက ရင်သားတခုလုံး အပြည့်ဖြစ်မှ နာပြီး ကိုက်ပြီး လာပြတယ်
(၂) ဆေးမြီးတိုတွေလိမ်း/ စုပ်တွေထိုးပြီး အနာတွေနဲ့ အနံ့တွေထွက် သွေးတွေထွက်ပြီးမှ ရောက်လာတတ်ကြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာကတော့ ရင်သားနဲ့ပတ်သက်တိုင်း ကင်ဆာမဟုတ်ပါဆိုတာပါဘဲ
( ဒါပေမယ့် ဟုတ်မဟုတ် သေချာဖို့တော့ ဆရာ၀န်နဲ့ပြသပြီး တိုင်ပင်သင့်ပါတယ် )
ဆက်လက်ပြီး ရင်သားနာတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှင်းပြချင်ပါတယ်….
ရင်သားကင်ဆာက တော်ရုံမနာပါဘူး။ နာပြီဆို အကျိတ်လည်း အတော်ကြီးနေပါပြီ။ လတ်တလောမှာ ဖုန်းတွေအသုံးများ ကွန်ပြူတာတွေ အသုံးများတာကြောင့် အာရုံကြောအားနည်းပြီး ကြွက်သားတောင့်/နာတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက် လည်ပင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ (တယ်လီကျန်းမာ Facebook pageမှာ လည်ပင်းကျီးပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်ထားပါတယ်။) ဖုန်း/ကွန်ပြူတာ တနာရီသုံးပြီး ၅မိနစ်နားတဲ့အကျင့်လေး လုပ်ပေးပါ။ တနာရီထိုင်ပြီးရင် ၅မိနစ်လမ်းလျှောက်ပေးပါ။ positionတခုထဲမှာ အကြာကြီး မနေပါနဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့ အာရုံကြောကြောင့် နာကျင်တာတွေ အထိုက်အလျောက် လျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်
ရင်သားမှာ အကျိတ်ရှိမရှိ စမ်းသပ်နည်း (သို့) Breast Self Examinationကိုလည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
မိမိရင်သားကို မိမိဘာသာ စမ်းတော့မယ်ဆို ကောင်းတာကတော့ အိပ်ရင်း စမ်းတာပိုကောင်းပါတယ်။ ညာဘက်ကို ဘယ်လက်နဲ့၊ ဘယ်ဘက်ကို ညာလက်နဲ့ လက်ချောင်း ၃ချောင်း ပူးပြီး ပြားချပြီး လှိမ့်စမ်းရပါမယ်
ရင်သားကို စမ်းတော့မယ်ဆို ရာသီလာပြီး တပါတ်လောက်မှ စမ်းပါ။ ရာသီလာခါနီးနဲ့ လာပြီးခါစမှာ မစမ်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။ တပါတ်တခါစမ်းပါ။ ခဏခဏ မစမ်းပါနဲ့
စမ်းသပ်တဲ့အခါ ပုံထဲကအတိုင်း (Quadrant) အပိုင်း တခုပြီး တခု စမ်းပါ။ စုစုပေါင်း တစ်ဘက်ကို ၆နေရာပါ။ စမ်းကြည့်လို့ အကြိတ်တွေ့ရင် နေရာ ၊ အရွယ်အစား နဲ့ အပျော့အမာကိုမှတ်သားထားပါ။ နောက်တစ်ပတ်နေလို့ ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါ အရင်ကထက် အကြိတ်က ကြီးလာသလား ၊ မာလာသလား ၊ နောက်ထပ်အကြိတ်အသစ်တွေ ထပ်ပေါ်လာသေးလား သေချာမှတ်သားစမ်းသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုလိုစမ်းတာကို Breast Self Examination (BSE)လို့ခေါ်ပါတယ်
ရင်သားမှာ အကျိတ် စမ်းမိတယ်ဆိုရင် အများအားဖြင့်….
(၁) အဆီကျိတ် (fibroadenoma, fibroadenosis)
(၂) အရည်အိတ် (breast cyst)
(၃) ဘော်လီကျပ်ကျပ်၀တ်လို့ သို့ ခိုက်မိလို့ ဖြစ်သော အကျိတ် (traumatic breast necrosis)
(၄) နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ ဖြစ်သော နို့ချောင်းပိတ် ပြည်တည်နာ (breast abscess)
(၅) phylloides လို့ခေါ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်တမျိုးနဲ့
(၆)ရင်သား ကင်ဆာ(carcinoma breast)တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
**ဘာအကျိတ်မှ မရှိပဲ ရာသီလာခါနီး ပြင်ဆင်နေတဲ့ ရင်သားဂလင်း (glands)တွေကို စမ်းမိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်**
အဆီကျိတ်ထဲမှာ fibroadenoma ကတော့ ခွဲမှ ပျောက်မှာပါ။ သောက်ဆေးနဲ့ မပျောက်ပါ။ ၁၀%မှာတော့ တစ်နေရာမက ရင်သား တဘက်တည်းမက ဖြစ်တတ်ပါတယ်
နောက်အဆီကျိတ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ fibroadenosis ကတော့ သောက်ဆေးနဲ့ သက်သာတဲ့သူရှိသလို အကျိတ်မာလို့ ခွဲသင့်တဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ခွဲစိတ်ဆရာ၀န်က စမ်းသပ် ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်
ရင်သားအရည်အိတ် breast cyst ကတော့ ကြီးလို့တင်းရင်တော့ အပ်နဲ့စုပ်လို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါ
Traumatic fat necrosisကလည်း ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ ဘော်လီကျပ်တာ၊မာတာ၊နိုင်လွန်ပါတာ မ၀တ်ပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် တခါတရံ စမ်းသပ်လို့ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ခွဲခြားလို့မရရင်တော့ ခွဲပြီး အသားစပို့စစ်ဖို့ လိုပါမယ်
ပြည်တည်နာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ breast abscessမဖြစ်ခင် cellulitis ရောင်တဲ့အဆင့်မှာ ကြိုသိရင် ပိုးသတ်ဆေးသောက်၊ နို့သေချာဖိတိုက်၊ နို့မတိုက်ခင်နဲ့ တိုက်အပြီး နို့သီးခေါင်း သန့်ရှင်းရေး သေချာလုပ်ပေးရင် သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တည်သွားရင်လည်း အရင်ခေတ်ကလို ခွဲစရာမလိုပဲ အပ်နဲ့ ပြည်စုပ်ထုတ်ပြီး အပေါ်ကအတိုင်း ဂရုစိုက်ရင် သက်သာပါတယ်။ အတော်ဆိုးမှသာ ခွဲဖို့ လိုပါတော့မယ်။ နဂိုတည်းက မဖြစ်ချင်ရင်တော့ နို့ကို နှစ်ဘက်လုံး သေချာတိုက်ပါ။ နိုမထွက်လို့ဆိုပြီး မတိုက်ပဲမထားပါနဲ့။ နို့မတိုက်ခင်နဲ့ နို့တိုက်အပြီး နိ့သီးခေါင်းကို သန့်ရှင်းရေး သေချာလုပ်ပါ
နို့သီးခေါင်းက သားငန်ရည်ထွက်တာက အဝါရောင်/အကြည်ရောင်ဆိုရင် အများအားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိပါ။ နို့ပြွန်ချောင်းရောင်ရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (သွေးထွက်ရင်တော့ ‌အရေးကြီးပါတယ်။ အများစုက ကင်ဆာကြောင့်ပါ )
သားငန်ရည်ထွက်ရင် ခဏခဏ မညှစ်ရပါ။ ညှစ်ရင်ပိုထွက်ပါတယ်။
သတိထားဖို့က ဆရာ၀န်နဲ့ပြ၊ BSEလုပ်၊ ရေချိုးရင် နိ့သီးခေါင်း သန့်ရှင်းရေး (သို့) ဖော်ပေးပါ။ ဆပ်ပြာ အမြှုပ်ထအောင်တိုက်ပါ။
Phylloidesလို့ခေါ်တဲ့ ရင်သား အကျိတ်ကတော့ ကင်ဆာ မဟုတ်ပေမယ့် ခွဲပြီး ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခွဲဖို့လည်း လိုပါတယ်
ဒီအပေါ်က ရောဂါတွေဟာ ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်သားမှာ အကျိတ်စမ်းမိရင် ဆရာ၀န်နဲ့တော့ ပြသပြီးစမ်းသပ်‌စစ်ဆေးမှု ခံယူသင့်ပါတယ်
အမျိုးသမီး ၈ဦးမှာ ၁ဦးဟာ သူ့သက်တမ်းအတွင်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်တာမို့ ပုံမှန်စမ်း၊ ပုံမှန်ပြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ရင်သားရှိသ၍ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တာမို့ ဂရုစိုက် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်
မိသားစုထဲမှာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ဖူးတဲ့သူရှိရင်တော့ ကိုယ့်မှာ အခြားသူများထက် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းက၄ဆ ပိုများပါတယ်။ ဖြစ်ကို ဖြစ်မယ်တော့ မဟုတ်ပါ။ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်လို့မရပါ။ ဖြစ်လျင် စောစောသိပြီး ထိရောက်စွာ ကုသမှု ခံယူပါက အဖြေ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ စောစောစီးစီးသိဖို့က တပါတ်တခါ မိမိဘာသာ စမ်းပါ။ ၃လ သို့ ၆လ တခါ ဆရာ၀န်နှင့် ပြပါ။ လူငယ်တွေ(အကြမ်းအားဖြင့် အသက်၄၀အောက်)မှာ ရင်သား ဓါတ်မှန်မလိုပါ။ Ultrasound (both breasts and axiallae) တနှစ်တခါရိုက်ပါ
– အကျိတ်မာမာ စမ်းမိတယ် ၊ မလှုပ်ဘူး
– ချိုင်းမှာပါ အကျိတ်စမ်းမိမယ်
– နို့သီးခေါင်းက သွေးရည်ကြည်ထွက်
– နို့ပါးစပ်( လတ်တလောမှ ဖြစ်သော နို့ပါးစပ်)
– နို့သီးခေါင်း နှစ်ဘက် levelမညီတော့တာ
– ရင်သား အရေပြား တနေရာရာမှာ ချိုင့်သွားတာ
– ရင်သား အရေပြားက လိမ္မော်သီးခွံလိုဖြစ်တာတွေ အစရှိသည်ဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခြား လက္ခဏာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ၁၂%သော ရင်သား ကင်ဆာခံစားရသူကသာ နာပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။ မခွဲချင်တာနဲ့ ဆေးတွေလျှောက်မလိမ်းပါနဲ့။ ဆေးရွက်တွေ မကပ်ပါနဲ့။ စုပ်တွေမထိုးပါနဲ့
ကင်ဆာအဆင့်၁/၂ကနေ ၃/၄ အဖြစ်ကူးပြောင်းတာမြန်စေပါတယ်။ ဖြစ်လာခဲ့ရင် မကြောက်ပါနဲ့။ ကုစရာရှိတာ သေချာကုရင် ရင်သားကင်ဆာရှိတဲ့ လူနာတွေရဲ့ အဖြေရလဒ်ဟာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အရေးကြီးတာက စောစောသိဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ခွဲစိတ်ပြီးရင်လည်း ကင်ဆာဆေးသွင်းဖို့လိုရင် ‌သွင်းပါတယ်။ ဒါမှ ပြန်မဖြစ်မှာပါ။ လက်ခမောင်းခတ်နိုင်မှာပါ။ အနိုင်နဲ့ ပိုင်းပါ။ ကင်ဆာဆေးသွင်းဖို့ကို မကြောက်ပါနဲ့။ ဆေးသွင်းရတာ ရောဂါကျွမ်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ နောင်ပြန်မဖြစ်အောင်သွင်းတာပါ။ ရလဒ်ကောင်းပါတယ်
အချို့သော လူနည်းစုမှာတော့ အနာတွေဖြစ်၊ အကျိတ်ကြီးပြီး ရင်သားတခုလုံးအပြည့်ဖြစ်နေလို့ ခွဲစိတ်မှုမပြုခင် ကင်ဆာဆေးအရင်သွင်း သို့ ခွဲမရလို့ ကင်ဆာဆေးသွင်း စသည်ဖြင့် ကုရပါတယ်။ အဲလိုနောက်ကျတဲ့လူနာတွေမှာသာ နဂိုကင်ဆာရောဂါ အဆင့်မြင့်နေလို့ ရလဒ် မကောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စောစောသိရင် အဆင့်၁-၂ သမားတွေဟာ ကုသမှု ခံယူအပြီးမှာ သာမန်လူတွေနဲ့ တန်းတူ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာလည်း သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ကင်ဆာ ရောဂါအများစုဟာ ကုသမှုအပြီး ၂နှစ်အတွင်း ပြန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ အဲလိုပြန်မဖြစ်ဖို့ ခွဲစိတ်အပြီးမှာ ဆေးသွင်းခြင်း၊ ဓါတ်ကင်ခြင်းများလိုအပ်ပါက လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယါ။ ဒါ့အပြင်ကုသမှုခံယူပြီးလည်း ရောဂါပြန်ဖြစ်ပါက စောစီးစွာ သိရှိနိုင်ဖို့ ဆရာ၀န်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ရက်ချိန်းပုံမှန် ပြန်ပြရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဲလိုသာ ဆရာ၀န်နဲ့ လူနာ ဟန်ချက်ညီညီ ပူးပေါင်း ကုသကြမယ်ဆိုရင် ရင်သားကင်ဆာရှိတဲ့သူရဲ့ သက်တမ်းဟာ ပုံမှန်လူတွေလို သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ရင်သားကင်ဆာရလဒ်ကောင်းဖို့ စောစောသိအောင်ကြိုးစားစို့ “လို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်
ဒီလောက်ဆိုရင် ရင်သားမှာဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့ ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း အတော်အတင့် ဗဟုသုတရရှိကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
ပြည်သူအပေါင်း ရင်သားရောဂါများမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ